Enweghị paspọtụ COVID-19, enweghị mkpọchi ekeresimesi maka Great Britain
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Enweghị paspọtụ COVID-19, enweghị mkpọchi ekeresimesi maka Great Britain
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nwoke ọbọp na ọkọlọtọ Denmark guzoro na Amalienborg Palace Square, ebe ndị mmadụ bụrụ abụ iji gosi ụbọchị ọmụmụ 80 nke Queen Queen Margrethe II, na Copenhagen, na Eprel 16, 2020. - Ndị mmadụ n'ofe mba ahụ nwere ike na -abụ abụ site na mbara ihu, na windo. , n'ubi ma ọ bụ n'ebe ọrụ. A kagburu ememme ncheta ọmụmụ Queen Margrethe nke 80 n'ihi COVID-19, egwu nke ọrịa coronavirus. (Foto nke Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Foto nke NIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix / AFP site na Getty Images)
Minista ahụike Britain Sajid Javid gwara onye ọbịa BBC Nick Robinson na mgbe nyochachara okwu a, gọọmentị anaghị atụ anya mkpọchi mkpọchi ọzọ n'oge ezumike - n'adịghị ka afọ gara aga mgbe a gwara ezinụlọ n'ofe UK ka ha nọrọ onwe ha iche n'oge ezumike. ma mee mmemme fọrọ nke nta.
Onye minista UK ekwuputaghị paspọtụ COVID-19 maka ndị Britain.
Mkpọchi ezumike ekeresimesi enweghị atụ na UK, onye ozi kwuru.
66% nke ndị bi na UK na -agba ọgwụ mgbochi ọrịa ugbu a.
N'oge ngosi ụnyaahụ na ihe nkiri BBC, Minista ahụike UK Sajid Javid kwuru na gọọmentị Britain agaghị ewebata akwụkwọ ikike ngafe COVID-19 yana na ndị Britain 'ga-enweta ekeresimesi' n'afọ a.
Minista ahụike Javid gwara onye ọbịa BBC Nick Robinson na mgbe nyochachara okwu a, gọọmentị anaghị atụ anya mkpọchi ọzọ n'oge ezumike - n'adịghị ka afọ gara aga mgbe a gwara ezinụlọ n'ofe UK ka ha nọrọ onwe ha iche n'oge ezumike na ememme. ihe fọrọ.
Javid kwupụtara na ya "anaghị atụ anya mkpọchi ọzọ" n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi, na -ekwu na ya enweghị ike "ịhụ ka anyị ga -esi banye mkpọchi ọzọ." Onye ozi ahụ gbakwụnyere, agbanyeghị, na "ọ ga -abụ ihe ezi uche na -adịghị na ya maka onye ozi ahụike ọ bụla gburugburu ụwa iwepụ ihe niile na tebụl."
British Minista Ahụike Javid kwuputara na gọọmentị ga -ewepụ atụmatụ ya iwebata ụlọ Paspọtụ ọgwụ mgbochi COVID-19, ma ọ dịkarịa ala maka oge a.
Javid rụrụ ụka, "Anyị ekwesịghị ịdị na -eme ihe maka ya ma ọ bụ n'ihi na ndị ọzọ na -eme ya, na -ekwupụta na" ọtụtụ ndị mmadụ enweghị mmasị na echiche ahụ "nke igosi akwụkwọ iji rụọ ọrụ kwa ụbọchị.
Ọ sịrị, "Ihe m nwere ike ikwu bụ na anyị elelela ya anya nke ọma, n'agbanyeghị na anyị kwesịrị idobe ya dịka nhọrọ nwere ike ime, enwere m obi ụtọ ịsị na anyị agaghị aga n'ihu na atụmatụ maka paspọtụ ọgwụ mgbochi," .
Mgbe onye ọbịa BBC rụtụrụ aka na ọtụtụ ndị ozi-gụnyere minista ọgwụ mgbochi COVID-19, Nadhim Zahawi-ekwuola ụbọchị ole na ole gara aga na a ga-etinye paspọtụ ọgwụ mgbochi n'oge adịghị anya nakwa na ọ bụ ihe kwesịrị ime, Javid jụrụ. na-atụ aro na mgbanwe ntụgharị mere na nzaghachi ndị omebe iwu na-emegide nnupu isi Conservative Party.
Javid kọwara, "Ọtụtụ mba n'oge ha mere ya bụ ịnwale ịkwalite ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ma ị nwere ike ịghọta ihe kpatara ha jiri mee nke ahụ." "Anyị enweela ihe ịga nke ọma na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi anyị ruo ugbu a."
Enwere nde mmadụ 43.89 nọ na UK gbara ọgwụ mgbochi COVID-19 nke ọma, ebe nde 48 natara opekata mpe otu ọgwụ, dịka ọnụ ọgụgụ gọọmentị siri kwuo.
Dị ka data ọhụrụ si dị, 66% nke UK na -agba ọgwụ mgbochi nke ọma, na -eme ya obodo nke iri na asaa kacha gbaa ọgwụ mgbochi.